Tombin-tsolika etsy Alarobia : Hafindran’ny fanjakana any amin’ny lalam-pirenena faha 7 -
AccueilRaharaham-pirenenaTombin-tsolika etsy Alarobia : Hafindran’ny fanjakana any amin’ny lalam-pirenena faha 7
23/08/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Loza mitatao ho an’ny sarambam-be bahoaka manarena Antananarivo ny fisian’ny tombin-tsolika eto antanan-dehibe, satria raha ny fanazavana azo avy amin’ny manam-pahaizana raha sanatria misy ny firehetana dia 10 kilometatra manodidina dia ho tratry izany avokoa. Raha tsihivina nisy fotoana efa nisy ny fahamaizana ho an’ny tetsy Alarobia, izay goavana indrindra amin’ny foto drafitr’asa fitobian-tsolika. Sarotra dia sarotra ihany koa ny fifehezana ny afo raha sanatria tokoa mitranga ny loza, ka any fiarovana ny vahoaka sy ho fandraisana andraikitra dia tsy misy hafa tsy ny famindrana io tombin-tsolika io no vaha olana. Efa antaonany maro no efa tokony nandraisana ny andraikitra , ary ny fanjakana maro nifandimby teto Madagasikara dia tsy nisy niheritreritra ny fiarovana ny vahoaka amin’ny halalan’ny famindrana io tobin-tsolika io izay efa tokony natao efa ela. Ankehitriny anefa dia fantatra izao ary efa nivoaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny herinandro lasa teo fa ho afindra toerana ny tobin-tsolika izay mipetraka etsy Alarobia io.
Raha ny fanazavana izay nomen’ny minisitra misahana ny tetik’asan’ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany Narson Rafidimanana dia ny fanjakana Malagasy izay tahirin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ny halalan’ny minisiteran’ny M2PAT no mandray antanana ny lany rehetra, ary eo ihany koa ny fiaraha miasa amin’ny halalan’ny “3P” na ny fiaraha miasa amin’ny tsy miankina dia ny “logistique petrolier”izany . Raha ny fanazavana azo ihany dia mitentina any amin’ny 70 tapitrisa euro ny fandaniana amin’ny famindrana , izay tafiditra amin’izany ny fanamboarana maro isan-karazany toy ny lalàna any amin’ ilay toerana isian’ny fitehirizan-tsolika vaovao , sy ny fotodrafitr’asa hafa satria dia ho Tanana vaovao mihintsy ny toerana any amin’ny lalam-pirenena faha fito io . Raha ny fanazavana izay azo avy amin’ny minisitra tompon’andraikitra ihany izay tafiditra anatin’ny tetik’asan’ny filoham-pirenena, dia efa manomboka ny asa fanamboarana @ izao fotoana izao any amin’ny lalam-pirenena faha fito izay hamindrana ny etsy Alarobia io. Ka aorian’ny fahavitan’ny asa any indray no hanombohan’ny asa fandravana sy ny fihomanana ny etsy alarobia hifindra any amin’ io toeram-baovao io, satria ny famatsiana solika eto andrenivohitra dia miankina betsaka amin’ireny fitobian-tsolika ireny. Ankoatran’ny fiarovana ny tanana tsy ho potiky ny afo ihany koa izay anton’ny famindrana hoy ny ny minisim-panjakana misahana ny tetik’asa ny filoha sy ny fanajariana ny tany Narson Rafidimanana, dia eo ihany koa ny famoronana tanana vaovao sy asa amin’ ny toerana vaovao hisy ny fitobian-tsolika vaovao. Mandray roa tokoa izany ny minisitera amin’ ity asa tanterahina ity, satria eo ny fanajariana ny tany amin’ny halalan’ny tanana vaovao sy ny tetik’asan’ny filoha amin’ny fiarovana ny tanana .
Nitondra fanazavana ara-teknika mikasika ny tokony hanavaozana ny lalàm-panorenana ny mpahay lalàna sady mpampianatra lalàna, Imbiky Herilaza omaly, manoloana ny resa-be izay mandeha etsy sy eroa amin’ izao fotoana. Ho azy dia misy, ary maro ...Tohiny